Jidhdil iyo mindi-tooreyn Soomaali loogu geystay Jigjiga – Radio Daljir
Febraayo 13, 2020 4:55 g 0
Magaalada Jigjiga, xaafadda 11aad, waxaa maanta jidhdil iyo mindi-tooreyn loogu gaystay wiil Soomaaliyeed oo dhallinyaro ah. Jidhdilka waxaa geystay rag ka soojeeda qowmiyada Oromada.
Wiilka la dhaawacay oo ka soojeedaa deegaanka Tuli Guuleed ayaa hore uga mid ahaa dhallinyaro dhawaan si sharcidarro ah xabsiga Jigjiga loogu xidhay, ayaga oo Komishanku ku eedeeyey in ay “kamidyihiin ragga abaabula difaaca deegaanka Tuli Guuleed, una yimid Jigjiga si ay u abaabuulaan muddaharaad ka dhan ah Kusimaha Madaxweynaha kilalka Soomaalida (DDS), Md. Mustafe Cagjar.”
Xafiiska Komishinka Booliska DDS oo la geeyey dacwad ka dhan ah raggii jidhdilka iyo mindi-tooreynta u geystay wiilka dhibbanaha ah ayaan weli la raadin, sharcigana la horkeenin. Ragga dhawaaca geystay qaarkood ayaa kamid ah ciidanka dharcadda ee loo yaqaan “Adhmafatanaga.”
Dowlad Deegaanka Soomaalida 207 Wararka 19852